PressReader - Ilanga: 2018-02-08 - Uyibambe ishisa usomabhizinisi omnyama
Uyibambe ishisa usomabhizinisi omnyama
Uke waba semabhukwini amnyama ngaphambi kokuphumelela
Ilanga - 2018-02-08 - Bono - NONHLAKANIPHO SHINGA nonhlakaniphos@ilanganews.co.za
IZINGQINAMBA aqale wabhekana nazo akazivumelanga ziphazamise amaphupho akhe okuphumelela usomabhizinisi ohlonishwayo emkhakheni wezamahhotela, osezakhele igama kuwona.
UMnu Siphiwe Ngcobo (37) okuke kwadingeka aphume esikhungweni semfundo ephakeme - lapho ebenza khona iziqu zeMachanical Engeneering - ngenxa yokungabi khona kwemali kubo, akakukuvumelanga lokho kumqede amandla njengoba ebalwa nabantu abamnyama abambalwa abakhula ngokukhulu ukudlondlobala kuwona lo mkhakha.
Okuqaphelekayo ngale nsizwa yaseMbali, eMgungundlovu, wukuthi ikhule amabhizinisi evele esegazini kuyona njengoba iqede umatikuletsheni eCarter High School, yaqhubeka nebhizini layo lokwenza o- ice block, okuthe uma sekuqala ubusika yabona ukuthi ibhizinisi layo liyawa, yanquma ukuya esikhungweni semfundo ephakeme.
Igama likaMnu Ngcobo like labasemabhukwini amnyama, kodwa akakuvumelanga lokho ukuba kumshovele phansi, kunalokho usebenze ngokuzimisela wagcina esethenga umhlaba okuyiwona enze ngawo imali engangesigidi esewudayisa.
Kakumthenanga amandla ukuthi kubo kuthiwe kayikho imali yokuba aqhubeke nemfundo.
Uthole umsebenzi wasebenza ngokuzikhandla. Kuthe enezinyanga ezintathu nje eqashiwe wathola isikhundla emayini iHarmony Gold, eWelkom.
Namuhla uMnu Ngcobo ungomunye wosomabhizinisi abahlonishwayo kwezamahhotela njengoba enangaphezu kwamabili KwaZulu-Natal futhi uphezu kwezinhlelo zokuvula amanye ungakapheli lo nyaka.
Uyilungu eliyiyimenenja yeIlawu Hospitality Group ngaphansi kwayo okukhona iLawu Inn obekuyiRegal Inn - ekuChief Albert Luthuli Street eMgungundlovu.
Le ndawo inamagumbi angama-40. UMnu Ngcobo ungumnikazi we-Ilawu Boutique Hotel and Studios esePresbery eBotanical Gardens enamagumbi ali-100 eyi-4 Star, Ilawu Guest House eseScotsville kulona leli dolobha, Ilawu Guest Lodge eseNewcastle enyakatho-mpumalanga, kanti maduze nje balungiselela ukuvula elinye ihhotela eVryheid, enyakatho yeKwaZulu-Natal.
Phezu kwawo la mahhotela, uphinde wavula izindawo zokudla ezibizwa nge-Ilawu Restaurant dla ezitholakala ngaphansi kwawo amahhotela akhe.
Ngaphansi kwalezi zindawo kunenkampani eyenza ukudla okusezingeni eliphezulu, iLawu Food Servises. Uma ekhuluma, akathandi ukuzigqamisa kakhulu njengoba encoma izisebenzi zakhe ngempumelelo yakhe.
Uthi izisebenzi zakhe kuthathe isikhathi eside ziqeqeshelwa ukuba ziphathe izivakashi zasemahhotela akhe nakwezinye izindawo zakhe ngendlela esezingeni eliphezulu.
Ngasekupheleni konyaka odlule, inkampani yakhe ihlabane ngendondo yeJob Creator of the Year emcimbi wokuklonyelizwa komabhizinisi obizwa ngeSanlam and Business Partners.
Uthi isifiso sakhe esikhulu wukuthi izisebenzi ezingaphezulu kwekhulu anazo zande kunalokhu eziyikhona.
Ngonyaka odlule uchithe imali engango-R10 million elungisa iLawu Boutique Hotel - phambilini leli hhotela belaziwa ngeBotanic Hotel.
"Ngenze izifundo zekhompyutha ngenza nezeMachanical Engineering eTechnikon Northern Gauteng manje eseyaziwa ngeTswane University of Technology (TUT).
"Kangiziqedanga ngenxa yemali. Ngabe sengiqashwa ezimayini kanti ngizoba nenhlanhla yokuthi bangithumele e-Italy ngiyofunda kabanzi ngomsebenzi ebengiwenza,” kusho yena.
Uthi ubuye lapho wathola amadlelo aluhlaza eHulamin - lapho kusatshalaliswa i-aluminium - kodwa wagcina exoshiwe. Yilapho izinto ziqale ukungahambi kahle khona.
“Ngibe sengiqala i- tuck shop ngidayisa ngihlala egalaji emzini kagogo. Yilapho ngithole ithuba lokuzihlola kahle ukuthi ngifunani ngempilo yami. Kuthe noma sebengibuyisela emsebenzini ngemuva kwezinyanga eziyisi-6 ngixoshiwe, ngangabe ngisahlala khona ngoba bese ngizazi ukuthi ngifunani,” kusho yena.
Uthi uchithe isikhathi egxile ekukhuliseni i- tuck shop yakhe ebeyingenisa imali, okuyilapho enqume khona ukuthenga indawo.
"Ngiqale lokhu ngithi ngifuna ukuthenga umuzi, ngathola ukuthi ngeke ngikwazi ngoba igama lami lingcolile (ngeke akwazi ukuthenga ngesikweletu), okuyilapho ngiqale khona ngathenga izindawo ezahlukane. Yilezi zindawo ezigcine sezingenzela isigidi sami zokuqala,” kusho yena.
Ngaphambi kwemidlalo yeNdebe yoMhlaba yeFederation of International Football Association (Fifa) yonyaka wezi2010, uthi uqashe umuzi wawushintsha wawenza i-Bed and Breakfast Hotel (B&B), okuyilapho engene khona kulo mkhakha asekuwona manje.
“Ngoba bengingenayo imali ngesikhathi ngiqala, bengizenzela yonke into ngisho ukupheka imbala. Bengizenzela amabhuku, kuyimi ohlanza indlu ngaleso sikhathi bese ngihlala ngiphinde ngilale emotweni yami ngoba ngingenayo indawo yokuhlala kwazise bengisebenza ubusuku nemini kuyona iB&B yami yokuqala.
"Ngigcine sengiqasha umuzi wesibili, ibhizinisi laqala ukukhuphuka,” kusho yena. Ngesikhathi eseqala ukwenza imali, ukhokhe zonke izikweletu abenazo walungi-sa igama lakhe okuyinto emsize kakhulu ngesikhathi esethola ithuba lokuthenga elinye lamahhotela abedayiswa. Ukwazile ukubokela imali yokuthenga lelo hhotela.
“Kungisize kakhulu ukuthi ngingumuntu okuthandayo ukufunda nohlale ethola ulwazi ngoba ibhizinisi kalimfuni umuntu ongazwani nokufunda.
"Ukuhlale ngiya emazweni aphesheya kungisize ekutheni ngikwazi ukukhulisa amahhotela ami. Ngiyakholelwa kakhulu ekutheni nezisebenzi zami ngiziyise ezindaweni ezahlukene, ikakhulukazi emazweni angaphandle ukuze zikwazi ukuthi ukunakekelwa ngendlela yinto enjani.
"Lokhu kwenza zikwazi ukunakekela abantu ngendlela esezingeni eliphezulu,” kusho yena.
Izisebenzi zakhe zisanda kuya eMozambique lapho zifunde ukuthi kusetshezwa kanjani kulo mkhakha. “Ngenyanga ezayo siyalifulathela elakuleli siya phesheya nezimenenja zenkampani lapho sizohambela khona izindawo namahhotela ahlukene emazweni okubalwa kuwona iPanama (esecentral America) naseBrasil (South America)," kusho yena.
Uthi ukuyisa izisebenzi zakhe emaholidini kuyisidingo ngoba kuzenza zivuleke imiqondo zingazibukeli phansi zazi ukuthi ukulala emahhotela ngokwabantu abathile kodwa zibe zisebenza ehhotela.
Izisebenzi zakhe sezike zavakashela eSpain, e-Italy nakwamanye amazwe. Le nsizwa inabantwana abathathu kanti kayikaganwa njengoba ithi okwamanje isakhulisa ibhizinisi layo.
Isifiso sayo esikhulu wukukhulisa igama iLawu laziwe ngokuhlinzeka amakhasimende alo ngendlela esezingeni eliphezulu ngaso sonke isikhathi.
NGEZINYE zezisebenzi ezisebenzela iLawu Hospitality Group kaMnu Siphiwe Ngcobo.
KAYIBANGA lula indlela eya empumelweni kusomabhizinisi waseMgungundlovu ongumnikazi wamahhotela, uMnu Siphiwe Ngcobo.